မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: မကြေးမုံ ဘာလဲ ဘယ်လဲ
posted by mirror time 3:33 PM
10 Responses to “မကြေးမုံ ဘာလဲ ဘယ်လဲ”
လွယ်သလား ခက်သလား မကြေးမုံ .. လွယ်သလား ခက်သလား..
ဘလော့ရေးချင်တဲ့လူဟာ စာအမြဲရေးနေဖို့တော့ လိုပေမပေါ့..
ဟားဟားဟား (ဗိုလ်အောင်ဒင်ရယ်သံဟု ခေါ်ကြသော အသံဖြင့်ဖတ်ရန်)
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ဟိုးတုန်းက စာအုပ်တွေကို သတိရတယ်။ အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာလဲ ဘယ်လဲ တို့။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘာလဲ ဘယ်လဲတို့။ အများစုက အစိုးရအာဘော် စာအုပ်တွေပါ။ ဇောက်ထိုးဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်တွေပေါ့။ မကြေးမုံကိုတော့ အတည့်အတိုင်း ဖတ်သွားပါတယ်။ ကြေးမုံဆိုတော့ ကျနော့် ညာလက်က ဘယ်လက်ဖြစ်နေတာက လွဲရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
စိတ်လျှော့ပါ။ တချိန်ကျရင် အားလုံးပြီးဆုံးသွားမှာပါ။ ဘယ်သူဟာ ဘာလဲဆိုတာ တချိန်ကြရင်တော့ ပေါ်လာမှာပါ။ ကျန်းမာရေးသာ ဂရုစိုက်
ဘယ်လဲ ဆိုတော့ ၂၀၁၀ ဆီပေါ့
ဘာလဲ ဆိုတော့ အားလုံးနဲ့အတူပေါ့း)
သိုင်းသင်ထားအုံးမယ် ဆိုပါလား။ ဘုရား ဘုရား... တော်ကြာ ထ ယောင်ပြီး ကန်ထုတ်လိုက်ရင် မရှိမဲ့ရှိမဲ့ သွားတွေ ကျွတ်ကုန်ရင် ဒုက္ခပဲ။ အနား သိပ်မကပ်ပဲ ခပ်ခွါခွါကနေ စကားပြောရမယ် ထင်တယ်။
ဘယ်သူ့ကို အမြင်ကပ်ကပ်.. အချိန်တွေကို တော့..ကပ်မရ...
ဘယ်သူ့ကို ဆွဲထိုးချင်ချင်...၂၀၁၀ ကတော့..ေ၇ှ့ ကို တိုး...
မျှော်လင့်ချက် အသစ်တွေ နဲ့.. နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ..ညီမကြီးရေ..
ဟုတ် ဖတ်သွားတယ် မမ
ဘာလဲ ....? blogger ....
ဘယ်လဲ....? blog ရွာ....
မကြေးမုံရယ် ... လှေနံနှစ်ဘက်နင်းရာက နင်းမယ့်နင်း ဘလော့ဂ်ဂါဘ၀ကို ရဲရဲနင်းပြီး စာရေးစမ်းပါ .. ( ဗိုလ်အောင်ဒင်လေသံဖြင့် ဖတ်ရန်)
ဟ ဟ အမကိုစာဆက်ရေးဖို့တိုက်တွန်း မလို့ဟာ။ နည်းညီရေးထားတာဖတ်ပြီး ရယ်ချင်သွားတယ်။ လွယ် လွယ် ခက် ခက် ဆက်ရေးပါအမရေ။ အားပေးနေမှာပါ။